Hogaamihaya Maamulaka jubba oo maanta booqasho rasmi ah ku tagey Degmada Doolow ee Gobolka Gedo – STAR FM SOMALIA
Hogaamihaya Maamulaka jubba oo maanta booqasho rasmi ah ku tagey Degmada Doolow ee Gobolka Gedo
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) iyo wefdi uu hogaaminaayo, ayaa maanta waxay gaareen Degmada Doolow Ee Gobolka Gedo.
Madaxweynaha waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay Degmadaasi, iyadoo dadkii soo dhaweeyay ay wateen sawiradiisa, oo ay kor u lulayen, iyagoona ku soo dhaweeyay ereyo loogu tala-galay soo dhawaynta Madaxweynaha.
Madaxweynaha waxaa lagu wadaa in uu u gudbo tiro ka mid ah Degmooyinka Gobolka Gedo. Madaxweynaha waxa uu raadinayaa taageerada iyo kalsoonida shacabka reer Gedo.
Warar aan la xaqiijin, ayaa sheegaaya in Hogaamiyaha Jubbaland uu booqan doono Xarunta Gobolka Gedo Ee Magaalada Garbahaarey, halka warar kalana ay sheegayan in uu ku wajahan yahay Degmadaasi Baardheere.
Axmed Maxamed Islaam waxa uu dareensan yahay in culeys uu ka haysto bulshada Gobolkaasi Gedo, kuwaa oo Maamulkiisa u arka mid gacan ku rimis ah.
Booqashada Axmed Madoobe uu ku tagey Gobolka Gedo, ayaa waxay ku soo beegmaysa, xilli Doorashada Madaxtinimada Jubbaland, ay ku beegan tahay 15-ka bishan August.
Guddiga Doorashooyinka Jubbaland oo maanta lasoo xulay xilli ay diideen in dib loo dhigo Doorashada(Daawo Sawirada)
Safiirka Somalia ee Kenya oo warqadaha Aqoonsiga laga Guddoomay(Daawo Sawirada)